“Madaxweyne iyo Guddoomiyeyaal ha ku bixinnina aduun loolanka aad ugu jirtaan hanashada shirguddoonka Golaha Wakiilada si aydaan u noqon kuwa Ilaahay nacdalay” Xildhibaan Sheekh Ku-caddeeye. | Baligubadlemedia.com
“Madaxweyne iyo Guddoomiyeyaal ha ku bixinnina aduun loolanka aad ugu jirtaan hanashada shirguddoonka Golaha Wakiilada si aydaan u noqon kuwa Ilaahay nacdalay” Xildhibaan Sheekh Ku-caddeeye.
“Madaxweyne iyo Guddoomiyeyaal ha ku bixinnina aduun loolanka aad ugu jirtaan hanashada shirguddoonka Golaha Wakiilada si aydaan u noqon kuwa Ilaahay nacdalay” Xildhibaan Sheekh Ku-caddeeye
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: “لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي” وفي لفظ: ” والرائش بينهما” .
2) Xildhibaan ilaali mustabalkaaga siyaasadeed iyo karaamadaada, ta Golaha Wakiilada iyo ta bulshadii inna soo dooratey. Kana fogaw in aad noqoto Laaluush qaataha Ilaahay Nacdaley, Naxariistiisana ka fogeeyey ee xambaartay dambiga weyn ee laaluush qaadashada ah . Ogawba kaad laaluushka ka qaadatey iyo bulshada midna barri karaamo ku yeelan maysid agtooda, Soomaaliduna waxay tidhaahdaa: “Nin kugu muraad qumistay waxaad tahayna baray kaana muraadsay”.